Window ပြဿနာလေးတွေ ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » Video Edit » Window ပြဿနာလေးတွေ
Thursday, November 14, 2013 Video Edit
ကျွန်တော်တို. ၀င်းဒိုးစတက်လာချိန်မှာ၊ Desktop ကြီးတက်လာပြီး ကွန်ပြူတာက အလုပ်လုပ်လို.မရသေးဘဲ အကြာကြီး စောင့်နေရတဲ့ 'ဒုက္ခမှကင်းလွတ်ဖို့အတွက်၊
Run => msconfig => ထဲမှာ setup ဆိုတဲ့ Tab မှာ ရှိသမျှ ချက်ဘောက်တွေကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပေးထားလိုက်၊ ပြီးရင် OK နဲ. ထွက်၊ ပြီးရင် ကွန်ပြူတာ Restart ကျသွားမယ်။ ပြန်တက်လာရင်တော့ ၀င်းဒိုးပွင့်တာ မြန်သွားပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို.များ Run ထဲမှာ regedit လို.ရိုက်တာ Registry Editor ပေါ်မလာပဲ Error ကျလာပြီဆိုရင်တော့ Registry Editor ကို အန်နေဘယ် ပြန်လုပ်ပေးလို.ရပါတယ်။ ပြန်လုပ်ပေးဖို.ရာ။ Start => Run ထဲမှာ gpedit.msc ဆိုပြီး Enter ခေါက်။ Group Policy Editor ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ User Configuration => Administrative Templates => system ဆိုတာပေါ်မှာ select မှက်လိုက်ရင် ညာဘက်ချမ်းမှာ Pervent Access to registry editing tools ပေါ်မှာ ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ် ပါ။ Enabled ဆိုတာကိုရွေးပေးပါ။ Apply ရယ် OK ရယ်ကိုနှိပ်ပေးပါ။ Group Pokicy Editor ကိုပါပိတ်လိုက်ပါ။ အဲဒါမှာ Registry ကိုခေါ်လို.မရသေးဘူးဆိုရင် ခုနက လမ်းကြောင်းအတိုင်း ပြန်ဝင်ပြီး Enabled လို.ရွေးခဲ့တဲ့နေရာမှာ Not configured ဆိုတာကိုပြန်ရွေးပေးပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ တကယ် Registry ပြန်ခေါ်လို. ရသွားပါလိမ့်မယ်။